Ethiopian-ka ayaa Afrika ku hogaaminaya safarka rakaabka iyo xamuulka inta lagu jiro xiisadda COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Itoobiya » Ethiopian-ka ayaa Afrika ku hogaaminaya safarka rakaabka iyo xamuulka inta lagu jiro xiisadda COVID-19
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Itoobiya • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tewolde Gebremariam, Madaxa Fulinta ee Diyaaradda Ethiopian Airlines
Sida ku xusan warbixinta ururka African Airlines Association (AFRAA), Ethiopian waxaa kaalinta koowaad ka galay rakaabka iyo xamuulka xamuulka sanadka 2020.
Diyaaradda Ethiopian-ka ah ayaa qaaday 500 kun oo tan oo xamuul ah iyo 5.5 milyan oo rakaab ah iyada oo sii marisay xarunteeda weyn, garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Addis Ababa Bole.
Xamuulka xamuulka ayaa qabtay in ka badan 500 kun oo tan oo xamuul ah sannadka 2020 dhexdiisa.
Itoobiya ayaa sidoo kale liiskan ka gashay wadamada ugu xiriirsan qaarada Afrika.
Kooxda Diyaaradaha Itoobiya, diyaaradda ugu weyn ee Pan-Afrika, waxay noqotay tan ugu sareysa Afrika
duulimaadka rakaabka iyo xamuulka xamuulka oo sii haya booskeeda hoggaamineed ee qaaradda.
Sida ku xusan warbixinta African Airlines Association (AFRAA), Ethiopian waxaa kaalinta koowaad ka galay rakaabka iyo xamuulka sannadka 2020. Ethiopian waxay qaadatay 500 kun oo tan oo xamuul ah iyo 5.5 milyan oo rakaab ah iyadoo sii martay xarunteeda weyn, Addis Ababa Bole.
Madaarka Caalamiga ah.
Kooxda Diyaaradaha Itoobiya Maamulaha guud Tewolde Gebremariam ayaa yidhi, “Sharaf bay noo tahay
sii wadno hogaamintayada xitaa inta lagu gudajiray Dhibaatada Faafa ee Caalamka oo burburisay warshadaha duulista. Tani waa muujinta adkaysiga iyo firfircoonida. Waxaan ku faraxsanahay doorkii aan ka ciyaarnay ladagaalanka aafada anagoo sii wadanayna isku xirnaanshaha hawadeena ee aadka loogu baahnaa gudaha Africa iyo aduunka intiisa kale anagoon wax duulimaad ah hakad galin. Waxaan ku badbaadineynaa nolosha dadka gaadiidka hawada ee sahayda caafimaadka iyo tallaalada. ”
Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa liiska ugu sarreysa ka gashay taraafikada ugu badan ee rakaabka laga raaco garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa Bole International Airport. Tiro dhan 5.5 milyan oo rakaab ah ayaa lagu daabulay garoonka diyaaradaha. Gadiidkan, Ethiopian waxay daabushay 5.2 milyan oo rakaab ah rakaabka harayna waxaa daabulay diyaaradaha kale. Xamuulka xamuulka ayaa qabtay in ka badan 500 kun oo tan oo xamuul ah sannadka 2020 dhexdiisa.
Itoobiya ayaa sidoo kale liiska ugu sareysa ka gashay wadamada ugu badan ee xiriirka la leh qaarada Afrika sababo la xiriira duulimaadyada tirada badan ee Ethiopian Airlines oo qaarada dhexdeeda ah.